Pirinty vita amin'ny solita
Varotra sy fisoratana anarana amin'ny patanty any Shina
Vokatra amin'ny talantalana
Ny fepetra sy ny takiana amin'ny fitehirizana PCBA amin'ny dingana samihafa
Ny fizotry ny famokarana PCBA dia mila mandalo dingana fitehirizana maromaro. Rehefa vita ny fandefasana patch patch SMT ary afindra amin'ny fanodinana plug-in dia matetika no mila tehirizina mandritra ny fotoana iray alohan'ny fikarakarana plug-in. Aorian'ny fitsapana ny birao PCBA ary vita ny fivorian'ny vokatra, misy matetika ...
Vahaolana farany an'ny New Pitch PCB Assembly
Ny fivorian'ny PCB tsara dia midika hoe fanangonana ireo PCB izay ny elanelana afovoany eo anelanelan'ny pad SMD sy ny baolina solder (tsimatra BGA, tsimatra IC, tsimatra mpampitohy…) dia tena kely dia kely. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny singa dia miaraka akaiky amin'ny tabilao vita pirinty, ary ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha ...
Olana maro samihafa sendra ny fizotry ny famolavolana sy ny famokarana PCB
Amin'ny dingan'ny famolavolana sy famokarana PCB, dia misy foana ny olana isan-karazany, toy ny lasa loko mainty, ny fifandraisana amin'ny granular amin'ny PCB, ary ny fihoaran'ny birao, sns. Misy faritra misokatra rehefa tapaka ny dian-tongotra, na rehefa eo amin'ny pad fa tsy amin'ny lead lead. Amin'ity tranga ity, misy ...
Ahoana ny famolavolana PCB matetika?
Ahoana ny fomba famolavolana PCB matetika? Voalohany, andao fantarina ny fanamby lehibe indrindra - crosstalk. Ankoatry ny crosstalk, tandremo ny famoahana ny signal PCB wires. Ny famoahana ivelany an'ny signal dia tsy ankasitrahana satria mampihena ny kalitaon'ny signal ary miteraka fikorontanana amin'ireo signal hafa. To ...
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny santionan'ny PCBA amin'ny famokarana betsaka amin'ny ho avy?
Matetika ny orinasa dia mihaona ny baiko maika ao amin'ny orinasa mpamokatra sy ny famokarana OEM elektronika, ary ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fanamarinana PCBA dia ny fanatsarana ny vokatra sy ny famokarana ary ny hafainganam-pandeha. Na ny famokarana sy ny fizotran'ny teknolojia PCBA amin'ny endrika ivelan'ny ...
Inona ny Silkscreen amin'ny PCB?
Ny Silkscreen amin'ny PCB no soritra sosona voalohany izay miasa ho toy ny mari-pamantarana hametrahana ireo singa amin'ny toerana mety ao amin'ny Printed Circuit Board (PCB). Silkscreen PCB Ny Silkscreen PCB dia mikendry ny hanampy anao hanavaka ireo singa PCB, teboka fanandramana, marika fampitandremana ary ...
Famintinana ny antony lehibe indrindra ary famakafakana ireo vahaolana azo atao mandritra ny dingan'ny SMT
Amin'ny fizotry ny fanodinana sy ny famokarana SMT dia sarotra ny misoroka ny olan'ny manipy ny milina puce SMT. Ny fanipazana fitaovana dia midika fa ny mounter dia tsy miraikitra aorian'ny fakana azy ireo ao anaty doka famokarana, fa manipy ireo fitaovana ao anaty boaty fanipazana fitaovana na p hafa ...
Inona ny fanamboarana fifanarahana elektronika
Ny famokarana fifanarahana elektronika (ECM), fantatra amin'ny anarana hoe EMS (serivisy fanamboarana elektronika), dia midika fa ny OEM (mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany) dia mamokatra famokarana vokatra elektrika amin'ireo mpamokatra EMS. ◆ Mety ho vahaolana maharitra izy io, ao anatin'izany ny famolavolana herinaratra, ny firafitra PCB, ny singa su ...
Vokany tsara amin'ny takelaka fizaran-tany FPC malefaka
Amin'ny indostria maoderina, araka ny fantatsika fa misy karazana PCB maromaro, izay samy manana ny tombony ananany. FPC (board circuit fleksibel) dia iray amin'ireo takelaka boribory fahita indrindra ary ny sehatr'asa isan-karazany dia misy ny elektronika ho an'ny mpanjifa, ny fifandraisan-davitra, ny elektronika fiara sns ...
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao amin'ny famolavolana sy ny fananganana ny fampisehoana LCD Segment anao manokana
Ny famolavolana endrika manokana an'ny LCD dia mampiseho ny Liquid Crystal Displays na fantatra amin'ny anarana hoe LCD dia iray amin'ireo singa elektronika mahazatra indrindra izay manampy antsika hifandray amin'ny fitaovana na fitaovana iray. Ny ankamaroan'ny fitaovana azo entina manokana ary na ...
Ahoana ny fanamboarana PCBA ao amin'ny orinasa fanodinana chip SMT
Mandritra ny famokarana sy fampiasana ny fanodinana patch patch SMT, dia hisy ny asa tsy ara-dalàna na ny fampiasana ratsy ny vokatra manontolo aza noho ny olana amin'ny fizotry ny famokarana PCBA sy ny fizotran'ny fampiasana azy, ao anatin'izany ny lesoka fanodinana, ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy, ny fahanteran'ny singa ary ny antony hafa. Izany dia mitaky ...
Inona no atao hoe PCB matetika?
PCB haingam-pandeha dia PCB antena izay mamokatra, manombatombana, mamoaka ary mahazo signal radio-frequency mihoatra ny 1GHz. Mba hahalalana bebe kokoa ny atao hoe PCB matetika dia tokony ho fantatrao ny rafitra ifotony. Ny PCB tena avo lenta indrindra dia manana sosona 4 ary misy ny rafitra RF sy ny ...